‘सम्बन्धनको निर्णय हतारमा भयो’ – Sajha Bisaunee
‘सम्बन्धनको निर्णय हतारमा भयो’
। २२ श्रावण २०७४, आईतवार १६:०२ मा प्रकाशित
कृष्णा शर्मा, वीरेन्द्रनगर–८
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने गलत निर्णय गरेको छ । अहिले अन्य विश्वविद्यालयले सम्बन्धन रोकेको समयमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिन लाग्दा यसमा केही न केही चलखेल छ भनेर विद्यार्थीले बुझ्न जरुरी छ । विद्यार्थीले के चाहन्छन् विद्यालयले त्यता ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीको मागलाई बेवास्ता गरी निजी क्पापसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्नु काहाँसम्मको जायज कुरा हो सबैले बुझ्न सक्छन् । विद्यालयले आफ्नो स्वार्थको लागि निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिन लागेको हो । होइन भने विद्यार्थीहरूले गरेको यति लामो आन्दोलनलाई विद्यालयले किन सम्बोधन गरेन ?
सिर्जना शर्मा, वीरेन्द्रनगर–८
अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक क्यापस खोलेको छैन । आफ्नो आङ्गिक क्यापस नभइकन बाहिरको निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिनु एकदमै गलत कुरा हो । दुई महिनादेखि विद्यार्थीहरू निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर विद्यालयले विद्यार्थीहरूको मागलाई बेवास्ता गरी निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ त्यो एकदमै गलत हो । पहिला विद्यार्थीहरूको माग पूरा हुनुपर्दछ । विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नुको साटो विद्यार्थीलाई पढाइ छोडेर आन्दोलनमा लाग्न बाध्य विद्यालयलेले गराएको छ । विश्वविद्यालयको स्वार्थमा हामी विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
केशव खड्का, वीरेन्द्रनगर–५
निजी क्यपासलाई सम्बन्धन दिने यो विश्वविद्यालयले गरेको यो निर्णय त्यति आपत्तिजनक छैन । किनकी भौतिक पूर्वाधारसहितको गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने क्षमता भएको कलेजलाई सम्बन्धन दिइ विश्वविद्यालयको साहस हुनु भनेको आफैमा राम्रो कुरा हो । अनि रह्यो अहिले यस विश्वविद्यालयको अस्तित्व र गतिमा सुधार नआइकन सम्बन्धन दिनै हुँदैन र मिल्दैन भन्नु चाहीं आफैमा कमजोर पक्ष हो । विद्यालयले विद्यार्थीहरूकै भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिन लागेको हो यो कुरा सबैले बुझ्न र विद्यालयलय गरेको निर्णयमा समर्थन गर्न जरुरी छ ।
भीमा विक, वीरेन्द्रनगर–१२
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले निजी क्यापसलाई यसरी आफ्नो आङ्गिक क्यापस नहुँदै सम्बन्धन दिनु अलि मलाई उचित लागेन । किनकी पहिला विश्वविद्यालयको आफ्नो आङ्गिक क्पायस खोलेर त्यसपछि अन्य क्यापसलाई सम्बन्धन दिँदा यो विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरू पनि आन्दोलित हुने थिएनन् । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको हितमा काम गर्न लागेको हो भन्दै–भदौसम्ममा निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । अर्काेतर्फ विद्यार्थीहरू सम्बन्धन दिन दिदैनौं भने आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको माग पूरा गर्ने कि निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिन्छौं भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने ?
यामु क्षेत्री, वीरेन्द्रनगर–८
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिने कुरा गलत हो । विश्वविद्यालयले आफ्नो एउटा पनि आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन नगर्दै निजी क्पाम्पस सम्बन्धन दिन नहुने हो । निजी क्यापम्सलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको निर्णय गलत हो । विद्यार्थीहरू दुई महिनादेखि लगातार सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनेर आन्दोलित छन् तर, प्रशासनले विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्दै वार्ता गर्न छोडेर निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तर शिक्षामा प्रदान गर्नका लागि विश्वविद्यालयको ध्यान जान आवश्यक छ । विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय फिर्ता गरिनुपर्छ ।
निजी क्यापम्सलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन । पहिला त विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालयको आफ्नो आङ्गिक क्यापम्स छैन । त्यसैमा निजी क्यापम्सलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्नु गलत हो । विश्वविद्यालयले एकलौटी रूपमा आफ्नो निर्णय ग¥यो । विद्यार्थीहरूले के चाहन्छन् उनीहरूको विचार बुझ्ने कोशिस गरेन । विश्वविद्यालयलाई सुर्खेतमा स्थापना गर्दा सारा सुर्खेती जनताको योगदान हुने अहिले भने विश्वविद्यालयले एकलौटी आफ्नो निर्णय गर्न पाउँदैन । विद्यार्थी र सुर्खेती जनताको विचार बुझेर मात्र सही निर्णय विश्वविद्यालयले गर्न जरुरी छ ।
मिलन कँडेल, वीरेन्द्रनगर–१२
विश्वविद्यालय विश्वका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको उच्च शिक्षा प्रधान गर्ने एउटा विश्वव्यापी संस्था हो । तसर्थ यसको गुणस्तर, क्षेत्र, प्रभावकारिता आदि जस्ता कुराहरू अझै महŒवपूर्ण हुनेगर्छ । सम्बन्धन दिँदा सबैभन्दा पहिले अध्ययन भइरहेका विषयहरूको प्रभावकारिता वा व्यवस्थापन गरी सम्बन्धन दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय एउटा सानो क्षेत्रमा सीमित रहेर आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न सकिदैन । तसर्थ त्यसको विकास विस्तारको लागि पनि सम्बन्धन दिनुपर्दछ । तर सम्बन्धन दिँदा केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययन नै नहुने विषयमा सम्बन्धन दिनु त गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य हो ।
रमिता शाह, वीरेन्द्रनगर–७
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले निजी विद्यालयलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तर शिक्षा प्रदान गरिरहेको क्यापसलाई दिनुपर्छ । सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर विद्यार्थीहरूको मागलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कुरामा विद्यार्थी र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र छलफल गरेर दिँदा राम्रै हुन्छ । अर्काे कुरा सम्बन्धन दिँदा केन्द्रीय विद्यालयमा पढाइ नभएका विषयमा सम्बन्धन दिनु हुँदैन । विश्वविद्यालयले यसरी हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्बन्धन भदौभित्रमा दिन्छौं भन्नुभन्दा पनि पहिला विद्यार्थीहरूसँग वार्ता र सहकार्य गरेर काम गरेको भए यसरी विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुने थिएनन् ।
ममता विक, वीरेन्द्रनगर–८
विश्वविद्यालयले निजी क्यापसलाई सम्बन्धन दिने कुरा एक हिसाबले ठीकै पनि हो अर्को कुराले अहिले न सम्बन्धन दिनमा विश्वविद्यालय हतार गरिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई । किनकी विश्वविद्यालयलाई विश्वमा चिनाउने एउटा माध्यम सम्बन्धन दिनु पनि हो । शिक्षामा गुणस्तर आउँछ । अर्काे कुरा विश्वविद्यालयको पहिला आफ्नै आङ्गिक क्यापस खोलेर सम्बन्धन दिएर मात्र निजी क्यपासलाई सम्बन्धन दिएको भए राम्रो हुथ्र्यो । विश्वविद्यालय सानो क्षेत्रमा सीमित हुनुभन्दा पनि यसको क्षेत्र व्यापाक बनाउनु राम्रो कुरा हो । तर विद्यार्थीको इच्छा विपरित एकलौटी विश्वविद्यालयले निर्णय पनि गर्नु हुँदैन ।